Kugadzira Induction Kuchenesa Shrink Fitting Shafts uye Zvikwereti Mashini
musha / PWHT Machine / Induction Kuchenesa Shrink Inokodzera Shafti uye Bearings
Induction Kuchenesa Kusvuta Fitting Shafts uye Zvikwata
Category: PWHT Machine Tags: Induction inopera fitting, Shrink shaka yakakodzera, Shrink fitting, Dzorera fiti dzakakodzera, Dzorera nzira yakakodzera, Shinda shaft yakakodzera
Mutungamiri weInduction Heating System Manufacturer Anoshandiswa mu Shrink Fitting Shafts, achikurumidza kupera zvakakodzereka Kutakura, vatengesi, kusveta kushungurudzika kuderedza, kutengesa kushandiswa kwekushisa kupisa, PWHT.
MYD series of induction kutemwa kwehutachiona hwekukanda shafts nemakumbo, fipeline inopisa, pre-welding heat uye post-welding heat treatment
Induction Kuchechera zvakanaka
Inofananidzwa nehuwandu hwekushongedza uye kushungurudzika kwekugadzirisa nzira, kupisa kwekuchera kunopa zvipo zvakasiyana-siyana, kusanganisira kufanana kwehutano hwehutano uye hutsika, kuderedzwa kwenguva yakareba, nekudhura kwezvinhu zvinodhura. Induction Kuchenesa kunewo yakachengeteka, yakavimbika uye iri nyore kushandisa, uye yakakwirira kune dzimwe nzira dzakasiyana-siyana.
Zviratidzo zveDSP kuisa induction system
• Kutonhora kwemhepo: Zviri nyore kuisa.
• Rekodhi yetembiricha: Kurekodha iyo yese yekudziya curve woiprinta
• Soft induction coil: Nyore kumhepo pane akasiyana anoshanda chidimbu.
Tembiricha Yekudziya: Chengetedza iyo yekudziya maitiro nePWHT inoda.
• PLC inobata skrini: Intuitive kuona uye nyore kushandisa.
Induction kudziyisa simba: Yakakwira kudziyisa kumhanya uye kupisa kupisa, magetsi magetsi Kuchengetedza
• Nokukurumidza kudziyisa kumhanya. Inogona kusvika 300 degree C mukati me10 Min. Sevha kudziyisa nguva
Simba reMagetsi Kuchengetedza: Inogona kuchengetedza inopfuura 50% magetsi emagetsi kuenzanisa kana ichienzaniswa neyakajairwa preheating uye kushungurudzika nzira dzekudzora
Zvikumbiro uye zvikuru kushandisa masimi
MYD series induction heat system inobudisa-refrigerating induction heat equipment ne DSP system. Zvinonyanya kushandiswa pombiyuta inopisa, kusati kwatsvaira kwekugadzira, kushandiswa kwemazuva ekushisa kupisa, kusununguka kwepfungwa, kubata, nekudaro.
Kupfeka kupisa, Shrink fitting
Weld preheating, Post-weld Heating Treatment, Stress relieving, Annealing
Imabhizimisi inobatanidzwa inosanganisira petrochemical, mafuta uye gesi mapaipi, aerospace, mashizha, midziyo, midziyo yemagetsi, magetsi, masimbi emadziro, nzvimbo yepakati, mabhiriji ezvitima, magetsi mvura, kuvakwa kwemigodhi, kugadzira motokari, simba renyukireya, minda, kushandiswa kwemaplastiki.
Iko inotengesa mafashoni ekupisa anosanganisira
1. Induction kudziyisa simba
2. Induction coil (Clamp induction coil) kana (Soft induction coil)
3.Kubatanidza tambo kune iri nyore kubatanidza iyo coil uye yekudziya simba
5. PLC inobata skrini
6. Tembiricha yekupurinda ine purinda
7. K mhando thermocouple & yekubatanidza tambo
8. kuputira gumbeze
9. Uye chimwe chikamu.
1. K mhando thermocouple
3. Kuvhara Blanketi
4. Uye zvichingodaro
Mushini muduku unotakura pWHT
Portable Preheat Welding Machine ne induction